Fanတွေဆီက ပုံတူပန်းချီကားတွေ လက် ဆောင်ရလို့ပျော်နေတဲ့ ကျော် ထက်ဇော် – XB Media Myanmar
Fanတွေဆီက ပုံတူပန်းချီကားတွေ လက် ဆောင်ရလို့ပျော်နေတဲ့ ကျော် ထက်ဇော်
June 24, 2020 Bestie_Author
ကျော်ထက်ဇော်ကတော့ MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကို စ တင်ရရှိခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ကျရာကာရိုက်တာအ တိုင်း စိတ်နှစ်ပြီးပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် သူပါဝင်သ ရုပ်ဆောင်ထားတဲ့”အမုန်းမှသည် ၊ အချစ်ဖွဲ့လေညင်း…. အစရှိတဲ့ ” ရုပ်သံဇာတ်လမ်း တွေကလည်း ပရိသတ်တွေအကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျခဲ့ပါတယ်။
ကျော်ထက်ဇော်ကတော့ သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေနဲ့အဆင်အသွယ်မပြတ်အောင်တော့ သူ့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ကျော်ထက်ဇော် က Fanတွေဆီကပုံတူပန်းချီကားတွေအမှတ်တရလက်ဆောင်ရလို့ပျော်နေကြောင်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါပုံတူပန်းချီကားတွေကိုတော့”Thank u” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူဖော် ပြထားခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်…။
Source:Kyaw Htet Zaw
ေက်ာ္ထက္ေဇာ္ကေတာ့ MRTV-4 ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲေတြကေနၿပီး ပရိသတ္အားေပးမွုကို စ တင္ရရွိခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ က်ရာကာရိုက္တာအ တိုင္း စိတ္ႏွစ္ၿပီးပီျပင္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူပါဝင္သ ႐ုပ္ေဆာင္ ထားတဲ့”အမုန္းမွသည္ ၊ အခ်စ္ဖြဲ႕ေလညင္း…. အစရွိတဲ့ ” ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္း ေတြကလည္း ပရိ သတ္ေတြအႀကိဳက္နဲ႔ထပ္တူက်ခဲ့ပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္ေဇာ္ကေတာ့ သူပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ ၿပီးဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္ေပ မယ့္လည္း ပရိသတ္ေတြနဲ႔အဆင္အသြယ္မျပတ္ေအာင္ေတာ့ သူ႔ရဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြကို လူမွုကြန္ က္စာမ်က္ႏွာကေန တင္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း ေက်ာ္ထက္ေဇာ္ က Fanေတြဆီ ကပုံတူပန္းခ်ီကားေတြအမွတ္တရလက္ေဆာင္ရလို႔ေပ်ာ္ေနေၾကာင္း သူ႔ရဲ့ လူမွုကြန္ရက္မွာေဖာ္ျ ထားခဲ့ပါတယ္။
အဆိုပါပုံတူပန္းခ်ီကားေတြကိုေတာ့”Thank u” ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔အတူေဖာ္ ျပထားခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္…။
လရဲ့အောက်ဘက်မိုင်အဝေးရုပ်ရှင်ကားမှာဒေါ်ခင်သန့်စင်အနေနဲ့ ပရိတ် သတ် ရှေ့ကိုရောက် လာတော့ မယ့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်
နုပျိုလှပပြီး အေးချမ်းတဲ့ အပြုံး လေး တွေနဲ့ ယနေ့အချိန်ထိ ချစ်စရာ ကောင်း နေဆဲဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည်
ပွဲစပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း MMA Fighter အောင်လအန်ဆန်း ပြိုင် ဘက်ကို ရှုံးနိမ့် October 30, 2020
အောင်လအတွက် လက်ခုပ်တီးဖို့ မြန် မာတွေအဆင်သင့် ရှိနေကြဖို့ပဲ လိုပါ တော့တယ် October 30, 2020
Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ် ဆော င် ကြည်စိုး (IC) October 30, 2020
ဝါဝါအောင်နဲ့ အောင်ခိုင်တို့ဇနီး မောင် နှံကိုသီတင်းကျွတ်မှာသွားရောက် ကန် တော့ခဲ့တဲ့MRTV-4 မင်းသားချောနှစ် ယောက် October 30, 2020
မွေးနေ့ရောက်ကာနီး မိသားစုကို လွမ်းလို့ မျက်ရည်ကျခဲ့တဲ့ Sinon October 30, 2020
အလှူအတန်းတစ်ခုမှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ် အားနဲ့ပါဝင်ချင်တဲ့ သမီးလေး ပြေသု ဒြာ ရဲ့ စိတ်ထားကို အဖေတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလာတဲ့ ပြေတီဦး October 30, 2020
သားအငယ်ဆုံးလေးရဲ့ မွေးနေ့ကို နေ အိမ်မှာပဲ မိသားစုတွေနဲ့ သိုက် သို က် ဝန်းဝန်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေး ခဲ့တဲ့ နေမျိုးအောင် October 30, 2020
နှစ်ယောက်သား ရန်ဖြစ်ရင် သူ့ရဲ့အား နည်းချက် တစ်ခုကိုပြောပြလာတဲ့ ဘေ ဘီ မောင်ရဲ့ ချစ်သူ သားဂန်း October 30, 2020
သိန်း ၇၂၅၀ တန်တန်ဖိုးကြီးအိမ် ကြီး ကို Live Sale ကတဆင့် အံ့ဩ စရာ ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ ထက်ထက် မိုး ဦး October 30, 2020